Basale dengwane kungqongqa imijondolo | IOL Isolezwe
Basale dengwane kungqongqa imijondolo
Isolezwe / 17 July 2012, 12:47pm /
16/07/12: DURBAN: SEKUPHINDE kwasha izindlu kuKennedy Rd emijondolo ngesonto okusolwa ukuthi ususwe yintambo kagesi. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
16/07/12: DURBAN: IMEYA yeTheku UMNZ James Nxumalo uhambele kuKennedy Rd ukuzobona umonakalo owenzekile. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
KUBE muncu ezinganeni ezihlala nemindeni yazo emijondolo eku Kennedy Road ngesikhathi zishelwa iyona yonke impahla yesikole kusha imojondolo kule ndawo nokuphoqe ukuthi zingakwazi ukuqala esikoleni izolo njengoba bezivulwa. Umfaniswano obese ulungisiwe, izincwadi zesikole ngisho nomazisi babazali konke kuphenduke umlotha.
Abantu basale nabebekugqokile ngenxa yomlilo oqalwe yizintambo zikagesi emjondolo owodwa kokheleka neminye engu-22.
Isolezwe lifike kuleya ndawo abafundi obekumele ngabe basezikoleni behleli emnyango bengazi nokuthi bazodlani.
Abekho abashonile noma abalimele kulesi sigameko. UNgqongqoshe wezeZindlu KwaZulu-Natal, uMnuz Ravi Pillay neMeya yeTheku uMnuz James Nxumalo nezikhulu zikamasipala bazifikele kule ndawo ukuzohlola umonakalo bekhalisana nabalinyalelwe yimpahla.
Yize le mijondolo ishe ngeSonto kodwa izolo bekusashunqa kwezinye izindawo, abantu bemi izixongololo, abanye beqoqa izinkethe belungiselela ukwakha kabusha.
UNksz Buyi Makhoba (26), uthi ubeseShowe eyongcwaba isihlobo sakhe ngesikhathi ethola ucingo obelumazisa ukuthi kuphelile ngendlu yakhe. Ushelwe ikhompyutha, ifriji, ithelevishini, umbhede amakhabethe ngisho isitifiketi sikaMatric imbala konke okube wumlotha.
“Lungene ucingo ngisemgqeni wabantu abebeklelele ukuyobona u-anti okokugcina ebhokisini. Ngivele ngaphelelwa amandla bengazisa ukuthi ayisekho indlu yami,” kusho uNksz Makhoba eshaqekile.
Unina wezingane ezine uNksz Nomonde Banga uthi akazi ukuthi uzothathani ahlanganise nani ukuze athengele izingane zakhe ezimbili izincwadi nenyunifomu okungqongqiswe wumlilo.
“Sisele nesikugqokile asazi ukuthi sizolala sidleni. Amakhaza aphelele kithina sihlezi emnyango sigade othayela bethu ubusuku bonke,” kubalisa uNksz Banga.
UMnuz Mthokozisi Rhadebe, umnikazi wendlu lapho kuqale khona umlilo, uthe naye ubone sekusha izintambo zikagesi ingasekho into angayenza ngoba bese kokheleleke indlu yonke. Uthe ubesanda kubuya edolobheni eyothengela izingane umfaniswano wesikole nokunye konke okucekeleleke phansi.
“Umlilo uqalwe wugesi. Ngithe ngiqalaza ubusugijima indlu yonke. Ngisale nebengikugqokile. Kushe ngisho umazisi wami, izimpahla zokugqoka nezasendlini,” kusho uRhadebe.
Amanye amalungu omphakathi abesethole ithuba lokwenza ibhizinisi njengoba ebeseqoqa izinsimbi nothayela abasale kusha eyodayisa e-scrap yard.